ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ ဆိုင်ကယ် မစီးရဘူးဆိုတာ ဘာကြောင့်လဲ
ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ ဆိုင်ကယ် မစီးရဘူးဆိုတာ ဘာကြောင့်လဲ
ဂျပန်နိုင်ငံ ယာမဟာ ဆိုင်ကယ်ကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆိုင်ကယ်အရောင်းစင်တာ လာရောက် ဖွင့်လှစ်တော့မယ်လို့ မကြာသေးခင်က သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး မြို့တော်မှာ ရန်ကုန်မြို့တော်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အကြီးဆုံး အထင်ရှားဆုံး မြို့တော်မှာလည်း ရန်ကုန်မြို့တော် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိကြပါတယ်။ နေပြည်တော်ကို ဇွတ်အတင်း အဓိက မြို့တော်လို့ ဇွတ်သတ်မှတ်ခဲ့သော သွားလေသူ အာဏာရှင်တို့က ဘယ်လိုလုပ်လုပ် ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ လူဦးရေ အရရော ခမ်းနားကြီးကျယ်မှုများ အပါအ၀င် အဆင့်မြင့် တည်ဆောက်ထားမှုများအရ အဓိက မြို့တော် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရနိုင်သော ခိုင်မာမှုတခုဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် ယာမဟာ ဆိုင်ကယ်များ ရန်ကုန်မြို့တော်မှ ပြည်သူများ ၀ယ်စီးခွင့်မရခြင်းကတော့ လူဖြစ်ရှုံးနေတယ်လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်နေပါတယ်။ လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့တော်သည် မြို့အင်္ဂါရပ်နဲ့ မညီသော တားဆီးမှု၊ ကန့်သတ်မှုနဲ့အတူ မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးနင်း အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ပင်ထားခြင်းခံနေရပါတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေ တိုင်းမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူစဉ် ကာလမှာပဲ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာနယ်နမိတ် ၃၁ မြို့နယ်အတွင်း ပြည်သူလူထုအများ မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးခွင့် ကန့်သတ် ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်နေတဲ့အထိ ပိတ်ပင်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက ဌာနဆိုင်ရာများ စီးခွင့်ရခဲ့ပြီး အခုတော့ ဌာနဆိုင်ရာများထဲမှ ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့က မော်တော်ဆိုင်ကယ် ၆၅ စီးသာ ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ နောက်ဆုံး ကန့်သတ် ပိတ်ပင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က မြို့တော်တွေထဲမှာ ဆိုင်ကယ်မစီးရဘူးဆိုပြီး ထူးထူးဆန်းဆန်း ရူးရူးနှမ်းနှမ်း အမိန့်ထုတ် ကန့်သတ်ခြင်းခံရတာ ရန်ကုန်မြို့တော်ပဲရှိပါတယ်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် နေပြည်တော် ရုံးမစိုက်ခင်အထိ ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ ဌာနဆိုင်ရာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကို စီးခွင့်ပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘယ်မြို့နဲ့မှ မတူတဲ့ ဆိုင်ကယ် နှစ်ယောက်စီးခွင့်ကို ပိတ်ပင် ကန့်သတ်ခဲ့ရာက ခုချိန်မှာ တယောက်ထဲတောင် စီးခွင့်မရတော့တာဖြစ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ကလွဲပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တနိုင်ငံလုံးမှာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် စီးခွင့်ပြုထားတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနဲ့ ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိတဲ့ ကန့်သတ် ပိတ်ပင်မှုတွေကတော့ အံ့သြကုန်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေကို ဆူပူမှာကြောက်ပြီး မြို့ပြင်ကို ရွှေ့ပစ်တယ်။ မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေကို တက်နေတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ဆိုင်ကယ်စီးခွင့်မရတော့ ဘယ်လောက် ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာ ရူးကြောင်ကြောင် အမိန့်ထုတ်တဲ့လူတွေ ကိုယ်ချင်းစာတတ်မှာမဟုတ်ဘူး။
တချို့ကတော့ ပြောကြပါတယ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးရဲ့သမီးကို စကော်ပီယံ လမ်းသူရဲတွေက ဆိုင်ကယ်နဲ့ တင်ပြီး ခိုးပြေးမယ်ပြောလို့ ရန်ကုန်မှာ ဆိုင်ကယ်စီးခွင့် ပိတ်တာတဲ့။ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ သမီးလည်း အခု လင်ရနေပါပြီ။ အဲဒီ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကို ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စကော်ပီယံ လမ်းသူရဲတွေလည်း ထောင်ထဲ ရောက်ကုန်ပြီ။ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးမှာ ဆိုင်ကယ်စီးခွင့် မရှိသေးတာ ဘာကြောင့်လဲ။ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး အနားယူသွားတာလည်း ကြာလှပါပြီ။ ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးက ပြည်သူတွေကတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ရူးရူးနှမ်းနှမ်း အမိန့်ကြောင့် လူစဉ်မမီ လူဖြစ်ရှုံးနေတုန်းပါပဲ။
နိုင်ငံသားချင်းအတူတူ ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ နေထိုင်သူများသာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးခွင့် အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေတာဟာ လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေမှုတခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘဲ၊ အကြောင်းပြချက် ခိုင်ခိုင်လုံလုံ မရှိဘဲ တားဆီး ချုပ်ချယ် ကန့်သတ် ပိတ်ဆို့မှုများဟာ အာဏာရှင်စစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်သော လုပ်ဆောင်မှုများသာဖြစ်လို့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ အစိုးရသစ်အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ကိစ္စ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မှာ တာဝန်ရှိနေပါတယ်။
ခက်နေတာက လွှတ်တော်တွေမှာ ဘေးထိုင် ငိုက်မြည်း ထထ ကန့်ကွက်နေတဲ့ တမတ်သားတွေလိုပဲ ပြည်သူက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဆိုသူတွေကလည်း ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီး မြို့အင်္ဂါရပ်နဲ့ ကင်းမဲ့နေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေအတွက် ထုတ်ဖော်ဆွေးနွေး တောင်းဆို တင်ပြမှုတွေ မရှိဘဲ ပုတ်သင်ညိုတွေလို ယိမ်းကနေမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်အတွက် ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ။
ရန်ကုန်မြို့တော် အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ အဆင့်မြင့်ဖို့ အတွက် မကြာမီ ကာလအတွင်း ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီမှ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဘတ်စကားလိုင်း များတွင် ၀င်ရောက်ဖို့၊ ဘတ်စကားလိုင်းတွေ အဆင့်မီ တိုးချဲ့နိုင်ဖို့ အမေရိကန် ဒေါ်လော သန်းပေါင်း ၄၅၀.၆၈၃ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့ ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီ ဥက္ကဌ မစ္စတာ ဘာဇူဟီစာအီဂါမိုတိုက ပြောကြားခဲ့တာကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ သွားလာရေး အခက်အခဲတွေ ရှိနေတာကို ကမ္ဘာက သိသွားပါပြီ။ ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ ဘတ်စကားစီးသူ ၈၄ %၊ ကိုယ်ပိုင်ကားစီးသူ ၆ %၊ တက္ကစီးကားစီးသူ ၅ %၊ မီးရထားစီးသူ ၅ % ရှိကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ ကောက်ယူထားတဲ့ စစ်တမ်းများအရ သိရပါတယ်။
အရင်တုန်းက လူလတ်တန်းစားများနဲ့ အရာရှိငယ်အဆင့် ၀န်ထမ်းများဟာ ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနင်း အသုံးပြုခွင့်ရခဲ့တာကြောင့် သွားလာရေး အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ကားဝယ်မစီးနိုင်တဲ့အတွက် တန်ဘိုးအသင့်အတင့်ရှိတဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ ၀ယ်စီးရင် ရုံးသွားရုံးပြန်၊ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် အဆင်ပြေနေကြပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ရန်ကုန်မြို့တော်မှအပ မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးခွင့် ရကြလို့ တမြို့နဲ့တမြို့ တရွာနဲ့တရွာ ကူးသန်းသွားလာမှုတွေ လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နယ်စပ် မူဆယ်နမ့်ခမ်းမှာတော့ ကောက်စိုက်သမား၊ လယ်သူမတွေပါ ဆိုင်ကယ် ၀ယ်နိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြန်မာကောက်စိုက်သမား၊ လယ်သူမတွေလည်း ဆိုင်ကယ်ဝယ်စီးနိုင်ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ တရုတ်လုပ် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေ သုံးသိန်းနဲ့အထက်၊ ထိုင်းနိုင်ငံလုပ် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကတော့ ဆယ်သိန်းနဲ့အထက် ပေါက်ဈေးတွေ ရှိနေတာ တွေ့ရပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ချောမွေ့စေတဲ့ ဆိုင်ကယ်အသုံးပြုခွင့်ကို ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ ပိတ်ဆို့ကန်သတ်ထားမှုကို ပြန်လည် ခွင့်ပြု ပေးမယ်ဆိုရင် ပြည်သူအချို့ကတော့ ဘတ်စကားတိုးစီးရတဲ့ ဒုက္ခနဲ့ ကင်းဝေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဆိုတာ အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ ရာဇ၀တ်မှုတွေ ကျူးလွန်ကြသူများက အသုံးပြုခဲ့တာမျိုး ရှိခဲ့ပေမယ့် အရေအတွက်အားဖြင့် နည်းပါတယ်။ ပြည်သူလူထုတွေ ချောက်ချားခဲ့တဲ့ စိမ်းလဲ့ကန်သာလို လူသတ်မှုမှာ ဇိမ်ခံကားတွေနဲ့ လူသတ်မှု ကျူးလွန်တယ်လို့ ပြောရမှာဖစ်ပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာသမားတွေလည်း ဆိုင်ကယ်စီးခွင့်ရရင် လုပ်ငန်းအတွက် အများကြီး အထောက်အကူပြုပါတယ်။ အရင်တုန်းက သတင်းစာတိုက်တွေက သတင်းထောက်တွေ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ အဆင်ပြေပြေ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်တာကိုလည်း သင်ခန်းစာယူသင့်ပါတယ်။ လောင်စာဆီဈေးတွေ ကြီးမြင့်နေချိန်မှာ ဆီစားသက်သာတဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးနင်းအသုံးပြုခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် တဖက်တလမ်းက အထောက်အကူပြုမှာပါ။
အခု မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးမှာ လိုင်စင်မဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေကို လိုင်စင်ထုတ်ပေးနေပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံကို တရားဝင် ဆိုင်ကယ်တင်သွင်းတဲ့ အရေအတွက်က ၁,၈၇၇,၅၉၆ စီး ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ယာမဟာ ဆိုင်ကယ်ကုမ္ပဏီက ဆိုင်ကယ်သစ်တွေ လာရောင်းမယ်ဆိုတော့ ဆိုင်ကယ်စီးခွင့် မရတဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်သူ၊ မြို့တော်သားတွေ မြင်သာမြင် မကြင်ရတဲ့ ဘ၀မျိုး မရောက်အောင် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မပေးဘဲ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ပိတ်ပင် တားဆီးကန့်သတ်ထားခြင်းကို အလျင်အမြန် သုံးသပ်ဆင်ခြင်မိပြီး ပြန်လည်စီးနင်းခွင့်ပြုပေးဖို့ လက်တို့ သတိပေးလိုက်ရပါတယ်။
သူ ထင် တာ သူ ပြော တာ ပဲ
မ လုပ် နိုင် လို့ ပါ
Htet Arker said...
ရန်ကုန်မှာက ဆိုင်ကယ်မစီးခိုင်းဘဲနဲ့တောင်မှ ဒီလောက် ယာဉ်ကြောရှုပ်ထွေးနေတာ။ ဆိုင်ကယ်များ စီးခိုင်းလိုက်လို့ကတော့ ဆူးလေးကနေ မင်္ဂလာဒုံကို ကားနဲ့သွားလို့ ရောက်ဖို့ဆိုရင်4နာရီမက ကြာသွားမယ် ထင်တယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ ကောင်းပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်စီးရင် ကားရှုပ်တာ ထရပ်ဖစ်ဂျမ်းဖြစိတာသက်သာမယ် ။ဓါတ်ဆီသက်သာမယ်(နိုင်ငံငွေကုန်သက်သာ)။လေထု
ညစ်ညမ်းတာ သက်သာမယ် (အဆုပ်ရောဂါ လျော့ကျ)။
ဆိုင်ကယ် မစီးရလို့ မသေဘူး။ ဆိုင်ကယ် စီးခွင့်ပြုလိုက်ရင် ယာဉ်တိုက်မှု့ပိုများလာမယ် အရူးရေ။ ပေးမစီးတာကောင်းတယ်။ အစိုးရဘာလုပ်လုပ် မကောင်းမြင်ကြတာကို။ ကောင်းတာကို ကောင်းတယ်လို့မြင်ကြပါ။ ရပ်ကွက်ထဲ့ကိုဝင်လိုက်ရင် ဆိုက်ကားရှောင်ရတာတောင် ပင်ပန်းလှပြီ။ ဆိုင်ကယ်ကိုပါရှောင်နေရရင်တော့ မလွယ်တော့ဘူး။ အရူးရေးတဲ့ မရေမရာဆောင်းပါးကို ဖတ်ကြည့်မိတာ ကိုယ်တိုင်အရူးထပြီးတော့ ဒီ Comment ကိုရေးမိတယ်။ ကျွန်တော်မှားတာပါ။
ဆိုင်ကယ် မစီးရ လို့မသေဘူး ဟုတ်လား ဆိုင်ကယ်စီးတာဘဲသေတာမှတ်လို့ စီးကမ်း ရှိစွားစီးရင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူးစိုတာသိရဲ့ လား သူများနိုင်ငံမှာဆိုင်ကယ် စီးတယ်စိုတာ ကား ဂျမ့်ဖြစ်မှာစိုးလို့အစိုရတွေ က ဆိုင်ကယ်ကို စီးခွင့်ပြုတာ မလေးရှားမှာစိုရင် ဆိုင်ကယ်လမ်းကို သီးသန့် ကိုလမ်းလုပ်ပေးထားတယ် ခုပြောနေတဲ့ comment ဝင်ရေးနကျတဲ့ ကိုကိုများ ဗဟုသု တ နည်းတားလား ဒါမှမဟုတ် ကားမဝယ်နိုင်သေးတဲ့အောက်ချေ လူတန်းစားတွေ ကို မနာလိုဖြစ်တာလား စိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘဲသိမှာပါ ခုအဲဒီ ဆိုင်ကယ်အေုကာင်းရေးတဲ့ စာရေးစရာကိုလဲ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ကျေး ဇူး တင်ပါတယ် ဘာမှ နားမလယ်တဲ့နလဘိန်း တုံးများကိုတော့ အော့နလုံးနားပါတယ် နဂို စစ်အစိုးရလူလားလို့ထင်ရတယ် ။
ပေးစီးဖို.အပြေည်.အ၀ထောက်ခ“ပါတယ်မတိုက်အောင်တော.ဆင်ခြင်မောင်းပေါ. အားလ“ုးအဆင်ပြေသွာမာအမှန်ပါစီးလို.၇အောင်ဆက်ကြိုးစားပါဥိးသိန်းစိန်၇ယ် စီးခွင်.ပေးလိုက်ပါလို.တောင်းဆို၇င်၇သွားမှာပါ
ဆရာလွဏ်းဆွေ တင် တဲ့ နိုင်ငံရေး ဆောင်းပါးတွေ အဆဲခံရတာ များလို့ လူမှု့ရေး တင်လဲ အဆဲမလွတ်ပါလား။ ယမဟာ က ဘယ်လောက် ရ လဲ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံ တွေရဲ့ မြိုကြီး တွေရဲ့ ပို့ဆောင်ရေး ပြသနာမှာ ဆေးမီတို ဖြစ်တဲ့ စကူတာ (ဆိုင်ကယ်) ရဲ့ ပြသနာ က ပို ကြီးပြီး ဟာ ဖြရင်ဘို့ မလွယ်ပါ။ မြို့တော် အင်ဂါ နဲ့ ညီဘို့ ရန်ကုန်ဟာ ဆိုင်ကယ် စီး ဘိုံအဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါ ။ မန်တလေး နဲ့ ဗီယက်နန် လိုဖြစ်သွား နိုင် သည်
in china, bejing, government wont allow to drive in capital because of air pollution. we must save our environment.disagree with u guys stupid idea
ရန်ကုန်ယဉ်ကျောက ဘန်ကောက်နဲ့စာရင် မပြောပါ့လောက်ပါဘူးဗျာ။ ဆိုင်ကယ်စီးတာဟာ ကားယဉ်ကျော်ပိတ်ဆို့မှူကိုတောင် လျှော့ချနိုင်တာပါ။ ဘန်ကောက်မှာ ကားတွေပိတ်လွန်းလို့ ဆိုင်ကယ်တွေစီးနေကြပြီးလေ။ ဆိုင်ကယ်စီးတိုင်း ကားတိုက်မှုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အယူစွဲကြီးက အရမ်းကိုလွန်ပါတယ်ဗျာ။ စည်းကမ်းတကျစီးဖို့၊ စီးကမ်းတကျမောင်းဖို့အရေးကြီးတာပါ။ ခင်ဗျားတို့လည်းဘန်ကောက်ရောက်ဖူးကြမှာပါ။. ဆိုင်ကယ်တွေပေါပေါမှပေါ၊ ကားတွေဆို ဆယ်လမ်းမောင်း သုံးဆင့်လမ်းမှာ မဆန့်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သိပ်ပြီးကားတိုက်မှူဖြစ်တယ်လို့မမြင်ဘူးဖူး။ ရန်ကုန်မှာတော့ အလကားနေရင် ဓါတ်တိုင်ကိုတိုက်တယ်။ ဆိုလိုတာက စည်းကမ်းတကျပေးမောင်းရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဆိုင်ကယ်စီးကြတော့ ကားအရေတွက်ပိုလျှော့သွားတာပေါ့။ စည်းကမ်းမရှိမောင်းရင်တော့ တစီးတည်းလည်း နေပြည်တော်လမ်းမှာမှောက်ကြတာပဲမလား။ အလကားလူတွေ သူတို့စည်းကမ်းဖောက်ချင်တာကို လာပြောနေတယ်။ ဆိုင်ကယ်စီးခွင့်ပေးရင် ကားတိုက်မှုများမယ်လေ ဘာလဲ။
ဗမာပြည်မှာ အဲလိုအမြင်ကျဉ်းလေးတွေ၊ ရှေးရိုးစွဲလေးတွေရှိနေသရွှေ့ တိုးတက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဆိုင်ကယ်စီးရင် ယဉ်ကျော်ပိတ်မယ်တဲ့။ ဆိုင်ကယ်တစီးစာဟာ ကားနှစ်စီးကြားကပေးထားရင် ဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ ဘန်ကောက်မှာ ဆိုအဲလိုဘဲပေးမောင်းတာ -- တိုက်တာတခါမတောင်မတွေ့ဘူးဖူး။ ဆိုင်ကယ်စိးခွင့်ပေးလို့ ကားစီးရေလျှော့ကျပြီး ပိုတောင်အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုတာ မသိဘူးလား။ အလကား အောင်သိန်းလှ တပည်တွေ့။
Latt Htut Naing said...
ကွန်တိန်တာတင်တဲ့ကားတွေကို ၁၉၉၀ လောက်က လမ်းတွေတံတားတွေရဲ့ဝန်
သတိရမိသေးတယ်ကွာ..ဆိုင်ကယ်ကြောင့်ယာဉ်ကြောပိတ်မယ်ဆိုတာကတော့အခုမှဘဲကြားဖူးတော့တယ်..ပရမ်းပတာမစီးအောင် အန္တရာယ်ကင်းအောင်ကတော့ပညာပေးပေါ့ မီးဒီးယားတွေ
ရှိ်နေတာဘဲ သေမဲ့သူကတော့ဘာစီးစီးမစီးစီးသေမှာပါဘဲ လူတန်းစားထဲမှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ဝန်ထမ်း အလယ်အလတ်တန်းစားနဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်တော်တော်အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
aungaung ko said...
ဆိုင်ကယ်စီးခွင့်ရရင်ခရီးရောက်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်စီးသူအများစုမှာလူငယ်တွေများပါတယ်။သူတို့ဟာလူကြီးတွေလိုထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းမမောင်းနှင် ကြဘူး။လီဘာကုန်ဆွဲပြီးမောင်းနေကြတာကိုတွေ့ ကြမှာပါ
ခရီးရောက်ပေမယ့် ရင်ခွဲရုံရောက်မယ့်အရေအတွက်လည်းများမှာမို့ခွင့်မပြုသင့်ပါ။
ယာဉ်ထိန်းရဲကဖမ်းဆီးတာမဟုတ်ဘဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရအာင်ဦးထုပ်ဆောင်းဖို့ 
llwinba kollwinba said...
Poe Khant said...
I support this article. I also accept there will be more accidents but will be less traffic jam.
But this is the people right. Now only person who have enough money to buy car are convenient for traveling, it is not fair.
Also can see trishaw who give more trouble than motorbike are allowed.
ဘာပဲလုပ်လုပ်စည်းကမ်းရှိစွာလုပ်ကြရင် အန္တရယ်ကင်းပါတယ်၊ ဆိုင် ကယ်ကိုသတိရှိစွာစီးရင် ခရီးပေါက်ပါတယ်၊ အခုလည်း ယာဉ်ကြောကျပ်တာစည်းကမ်းမရှိလို့ပါ၊ယာဉ်ထိန်းရဲထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းလို့ပါ၊ မြို့တွင်းသွားလာရေးအဆင်ပြေ အောင် မလုပ်ပေးလို့ပါ၊
တော်တော်ကို ဥာဏ်ပညာကြီးတဲ့လူတွေရဲ့ ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ရတာဘဲ။ ဆိုင်ကယ်ဆိုတာ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာ မဆို မြို့ပြ အင်္ဂါရပ်လို ဖြစ်နေတာ ကြာပေါ့။ ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးက သိပ်တော်တာဘဲ။ ဖိနပ် မတော်တာနဲ့ ဖနောင့်ကို ဓါးနဲ့ လှီးခိုင်းနေတယ်။ သောက်ရူးတွေ ၀င်ရေးနေတာ သိသာပါတယ်။ Very Good Article...
maung tun said...
စီးစရာဆိုင်ကယ်ကို ဘာလို.အပြစ်တင်နေကြတာလဲခင်ည အားလုံးအဆင်ပြေဖို. သေချာဝိုင်းစဉ်းစားကြပါခင်ည
ကိုယ်ထင်တာ ၀င်မရေးသင်.ပါ။ စည်းကမ်းမလိုက်နိုင်ရင်အရေးယူခံရမှာပေါ.။အများအားဖြင်.လူငယ်တွေပေါ.။စည်းကမ်းရှိအောင်ဝိုင်းဝန်းထိမ်သိမ်ပေးပေါ.။နိုင်ငံတိုးတက်ဖို. အခြေခံ လူလတ်တန်းစားတွေ အဆင်ပြေသွားလာလွယ်ကူအောင် အဓိကအရေးကြီးပါတယ်။
ko ko tin said...
ရန်ကုန်မှာဆိုင်ကယ်မစီးရဘူးသာပြောတာ အင်းစိန်၊ မင်္ဂလာဒုံ စတဲ့ဆင်ခြေဖုန်းမြို့တွေမှာ စီးနေလိုက်ကြတာ မနည်းကြည့်ရှောင်နေရတယ် တရားဝင်စီးခွင့်ပေးစေချင်တယ်
comment ရေးတဲ့ တကယ်ပညာရှိတွေဘဲ -ဘာမှ ကိုမပြောချင်တော့ဘူး-ဆိုင်ကယ်စီးတာ ယာဉ်ကြောပိတ်တယ်လို့ကွာ-စောက်ရူးတွေ လား မသိဘူး-လမ်းတွေ ကို စနစ်တကျ လုပ်မထားလို့ ယာဉ်ကြောပိတ်တာကွ-မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ကားစီးရေ ဟာ ဘန်ကောက်-kuala lumpur တမြို့ ထဲမှာ ရှိတဲ့ကားလောက်မများပါဘူး စောက်ရူးတွေရဲ့
နတ် ဆိုး said...
စည်းကမ်းတကျမစီးလို့ တိုက်လည်းသေကြပေါ့ကွာ။ without တွေထက်စာရင် ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာကမှ တိုက်သွားတဲ့ ဆိုင်ကယ်နံပါတ်မှတ်လို့ရဦးမယ်။ အခုလည်းမြို့တွင်း ၆မြို့နယ်လောက်ကလွဲရင် မြို့နယ်တိုင်းလိုလိုမှာ without တွေပေါမှပေါ။ သာကေတလိုနေရာတွေ မင်္ဂလာဒုံလိုနေရာတွေ စမ်းချောင်း ကမာရွတ် ကြည့်မြင်တိုင်တောင်မှ တစ်ခါတစ်လေ တစ်စီးစ နှစ်စီးစတွေ့သေးတယ် နံပါတ်မပါဘူး တိုက်သွားရင် ဘယ်နံပါတ်နဲ့ ဘယ်လိုလိုက်မလဲ။ ပိတ်ချင်ရင်လည်း ရအောင်ပိတ်။ ရအောင်မပိတ်နိုင်ရင်လည်း စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ခွင့်ပြု။ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်လုပ်နေရင်တော့ without ဆိုင်ကယ်နဲ့တိုက်မှုကအစ ခိုးဆိုးလုယက်ရာဇ၀တ်မှုအဆုံး မဖော်နိုင်တဲ့အမှုတွေနဲ့ အများပြည်သူနစ်နာမယ်။
ယဉ်ကြောမပိတ်ဆို့စေရေးအလို့ငှာ.. မြို့တွင်းရှိ ယာဉ်အမျိုးမျိုးအပါအ၀င် မြိုတွင်း နေထိုင်သူများကိုပါ မဲဇာတောင်ခြေသို့ ပို့သင့်သည်။
(လမ်းကဖြင့် ပြင်နေတယ်.. ပြင်နေတယ်တဲ့.. ဘာပြင်နေမှန်းကိုမသိဘူး.. တနိုင်ငံလုံး ကောင်းတဲ့လမ်းဆိုလို့ လက်ချိုးရေတွက်လို့ရတယ်။ အဓိကပြင်ရမှာကို မပြင်ပဲ.. တချိန်လုံး ဟိုဟာမလုပ်ရ၊ ဒီဟာမလုပ်ရ အမိန့်ပဲ ထုတ်နေတယ်။ အလုပ်မရှိဘူးလားမသိဘူး)
အော် ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ ကလေးတို့ လူတွေကရှိနေမှတော့ လုပ်တာတွေ ရှိနေမယ်လေ
မြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေဟာ ဆင်း၇ဲကြပါတယ် ကားတွေပေးသွင်းနေပေမယ်. လူအများစု မစီးနိုင် ကြသေးပါ ဆိုင်ကယ် ကိုပေးစီးမှ လူတွေ အချိန်သက်တာမယ် စ၇ိတ်သက်တာမယ် လုပ်ငန်တွေပိုသွက်လာမယ် ဆိုင်ကယ်စီးလူတန်းစားတွေ အတွက် ပိတ်ထားသလိုဖြစ် နေပါတယ် အိမ်တွေ ပေးမစီးတောင် မြို.နယ်တစ်မြို.နယ်ကို ဆိုင်ကယ် TAXI အစီး 3000 4000 ချပေးလိုက်၇င် အလုပ်အကိုင်တွေလည်း သိန်းချီ ၇ကြမှာပါ...
လောကမှာ ဆိုင်ကယ်ဆိုတာ မရှိမကောင်း ရှိမကောင်းပါ ပဲ။
မြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေဟာ ဆင်း၇ဲကြပါတယ် ကားတွေပေးသွင်းနေပေမယ်. လူအများစု မစီးနိုင် ကြသေးပါ ဆိုင်ကယ် ကိုပေးစီးမှ လူတွေ အချိန်သက်တာမယ် စ၇ိတ်သက်တာမယ် လုပ်ငန်တွေပိုသွက်လာမယ် ဆိုင်ကယ်စီးလူတန်းစားတွေ အတွက် ပိတ်ထားသလိုဖြစ် နေပါတယ် အိမ်တွေ ပေးမစီးတောင် မြို.နယ်တစ်မြို.နယ်ကို ဆိုင်ကယ် TAXI အစီး 3000 4000 ချပေးလိုက်၇င် အလုပ်အကိုင်တွေလည်း သိန်းချီ ၇ကြမှာပါ.. ။။။။။။။။မှန်ပါတယ် ဆိုင်ကယ်စီးခွင့်မပေးလို့ လူတွေ က တောင်ဆိုနေတာကို ကပြက်ရ ပြက်လုပ်တဲ့သူတွေ့ ကလုပ်နေသေးတယ် ဘယ်လို ငတုံးတွေ လဲ မသိဘူးဗျာ စည်း ကမ်း ရှိစွာစီးရင် ဖြစ်ပါတယ် တာဝန်းရှိတဲ့သူတွေလဲ ပါးစပ် အမိန့် နဲ့ပေးထားတာကို မလွန်ဆန်ရဲ ဘူးထင်ပါတယ် ခုဒီမို ကရေစိလို့သာပြောနေတယ် ပါစပ်အမိန့် တွေ နဲ့ပေးထားတာကို မဖြက်နိုင်သေးဘူး ဘာေုကာင့်လဲ ၊၊၊၊??????????????????????
Min Yan said...
Do yo know,how many people are there in yangon by taking own car to go to their works ?
If, these people change to motorbike...can be happen traffic ?
And also, havealook list of died people who are died by taking buses ,because they cannot buy own cars and cannot hire taxi.
you won't have any dangerous if you obey...
you go to work with your own car , petrol will take6liters...motorbike will take 1.2liter . So, petrol also can save...right?
If you are not follow rules and regulations when you die, we will not pitty for your life .
myomyint kyaw said...
ဆိုင်ကယ်သည် စီးရတာ မကောင်းပါ ရန်ကုန်တွင်ပေးစီးပါက သေးဆုံးသူဦးရေပိုလာမည်
ကားများသည့်အတွက် ဆိုင်ကယ်သာပေးစီးပါက စဉ်းစားစေချင်သည်
Bay Toe Bo said...
ဆိုင်ကယ် စီးခွင့်ရရင် တော်တော်အဆင်ပြေ သွားကြမယ်ထင်ပါတယ်။ လူလိုင်စင်ပေး ရင် သေချာ စမ်းသပ်မောင်း ခိုင်းမှကောင်းမယ်။ ကိုယ်ဖြစ် ကိုခံပေါ့။ ကားရှိလည်း တယောက်ထဲသွား ရတဲ့ အလုပ်မျိုး ကျတော့ ဆိုင်ကယ်က ကောင်းတာပေါ့။ လမ်းတွေလဲ ပိတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ တိုက်တာတော့ တခါတလေ အတိုက်ခံရတဲ့လူဘက်က မှားတာလည်း ရှိတာပဲ။ ဆိုင်ကယ်ကြောင့်လို့ ပဲ ဇွတ်ပြောလို့ မရဘူး။ ကားနဲ့တိုက်ရင် သေရမဲ့ နေရာ မှာ ကျိုးတာလောက်တော့ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒီတခါ မဲပေးရင် ဘယ်သူက ဆိုင်ကယ်စီးခွင့် ပြုမှာလဲ မေးပြီးမှ မဲထည့်ရင်တော့ စီးခွင့်ရမယ်ထင်တယ်ေ။